फेरि बढ्ने भयो सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता ! कसको कति बढ्छ पुरा हेर्नुहोस् – Enepali Samchar
फेरि बढ्ने भयो सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता ! कसको कति बढ्छ पुरा हेर्नुहोस्
December 26, 2020 adminLeaveaComment on फेरि बढ्ने भयो सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता ! कसको कति बढ्छ पुरा हेर्नुहोस्
e nepaalisamchaar / काठमाडौं । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारी कर्मचारीको तलब र सेवा–सुविधा बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
आफ्नो ३०औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बिहीबार बुझाउँदै आयोगले वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा तलब बढाउन सुझाब दिएको हो ।
पुरुषलाई महिलाका यी ७ अं’गले भुतुक्कै पार्छ(भिडियो सहित हेर्नुहोस)
जनावरको आन्द्राबाट बनेको क’न्डम, जसको मूल्य थाहा पाउदा तपाई छक्क पर्नुहुन्छ
निसन्तान दम्पत्तिलाई डाक्टरले यसरि आँखै अगाडि यौ न सम्पर्क गर्न लगाए
तीन दल बैठक जानुअघि खुल्यो यस्तो पोल: ओलीसँग महन्थको ‘भद्र सहमति’, शीर्ष नेता बेखबर !